Mayelana NATHI - IShanghai Gianty Ukuhweba Co, Ltd.
Ukuba yiphayona lesikhathi esizayo semfucumfucu engadalwanga nokwakha amanani amaklayenti ngasikhathi sinye.
UGianty udlala elinye lamabhande abalulekile ohlelweni lokunakekela i-eco-friendly. IGianty ithatha isibopho esengeziwe emphakathini ekuvikelweni kwemvelo.
Isungulwe ngonyaka we-2007, iGianty ibandakanyeka ekhiqizweni nasekuthengiseni kwamanye amazwe imikhiqizo enomusa yamakhasimende okubaza, inikezela ukwenza ihlanzeke. Indlunkulu yendlu kaGianty itholakala eShanghai kanti izitshalo ezimbili zitholakala eNgobo naseHunan.
IShanghai Gianty ibusa kakhulu ibhizinisi lokuthumela kwelinye izwe. I-Ningbo Gianty ibhekele kakhulu ukukhiqiza izinto ezilahlayo ezingasebenzi kahle. I-Hunan Gianty idlala indima enkulu ekukhiqizeni kabusha i-tableware nemikhiqizo ye-bamboo. Izitshalo zaseGianty kufaka phakathi ifektri yaseNgobo neHunan zinezintambo zokukhiqiza eziyi-17. Imishini engaphezu kwe-90% isetshenziswa ikhompyutha ne-robot. Ithimba lokuklama isikhunta likazwelonke likaGianty elisiza kuzwelonke linika iGianty inkambiso yemikhiqizo ehlangabezana nezidingo zamakhasimende. Ukuphrinta kwe-3D yesampula kunganikezwa ngezinsuku ezintathu nezinsuku ezinhlanu ngesampula yokugcina.
Ithimba lokuthengisa laphesheya kwezilwandle leGianty liqinisekisa ukuxhumana okusebenzayo nokusebenzayo nge-media ehlukahlukene futhi kudlulisela ngesikhathi izidingo zamakhasimende kwamanye amaqembu (ie ama-R&D, amaqembu okukhiqiza nawokugcina impahla). UGianty ungumkhiqizi oholayo futhi ongumhwebi wezitayela zokubhekela i-eco-friendly eziqinisekisiwe eChina. Imikhiqizo yayo ithunyelwe kumakhasimende angaphezu kwezi-20 emhlabeni jikelele.
Isungulwe ngonyaka we-2007, iGianty ibandakanyeka kakhulu ekwenzeni kanye nokuhweba kwemikhiqizo enobungani bemvelo yamakhasimende wokupheka, enikezela ekwenzeni umhlaba uhlanzeke. Ikomkhulu leGianty likhona eShanghai kanti lesi sitshalo sitholakala eNgobo, eChina.
Ngemuva kokuhlolisiswa nentuthuko yeminyaka eyi-12, iGianty ibe ngomunye wabakhiqizi abahola kakhulu nokuthengisa izinto zokulahla ukudla okwenziwa eChina, futhi yakha ubudlelwano obuqinile namakhasimende e-Asia, Europe naseNyakatho Melika. Ngo-2016, imali isiyonke yayingaphezulu kwezigidi ezili-10 zamadola aseMelika.
Senza hhayi kuphela imikhiqizo compostable kodwa futhi nezixazululo green. Uhla lwethu olubanzi lwe-tableware olusimeme lunikeza umkhiqizo wekhwalithi-yobungani ngentengo yokuncintisana.